ယောကျြားတှကေလေ မိနျးကလေးထကျ ပိုပွီး မာယာတှေ မြားသလို ပိုပွီးလဲ နားလညျရခကျပါတယျ – Shinyoon
ယောကျြားလေးတှကေ နားလညျရခကျတယျဆိုတာထကျ ပိုပွီး နားလညျရခကျပါတယျ ။ ဒါ မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ ခံစားရသမြှအမွငျပါ ယောကျြားတိုငျးက ဒီလိုပါဆိုပွီး ဝါးလုံးနဲ့ သိမျးကွုံးရမျးနတောမဟုတျဘူး ။
စာအုပျတှထေဲမှာ . . .မိနျးမတဈယောကျရဲ့မာယာတှဟော ဘယျလောကျကွောကျဖို့ကောငျးတဲ့အကွောငျးပဲ ရေးထားတတျကွတယျ မသိရငျ ယောကျြားတှမှော မာယာတှမေရှိတဲ့အတိုငျးပေါ့ တကယျဆို ယောကျြားတှေ သုံးတတျမာယာက ပိုပွီးမြားသလို ပိုပွီးလဲ ကွောကျဖို့ကောငျးပါတယျ ။ သိပျခဈြတာပဲ ဆိုတဲ့စကားကအစ . . . နောကျဆုံး မဖွဈနိုငျလို့ပါဆိုတဲ့ စကားလုံးတှေ တိုငျးမှာ မာယာတှေ ပါပွီးသားပဲလေ ။
ယောကျြားလေးတှကေ . . .ဘယျတော့မှ လမျးခှဲရအောငျလို့စပွီးမပွောဘူး ။ ဒါပမေယျ့ တဈဖကျက မိနျးမသားကို လမျးမခှဲခှဲခငျြတဲ့အထိ စိတျမပကျြ မပကျြပကျြအောငျ အမြိုးမြိုးတှလေုပျပွီး မိနျးကလေးဖကျက ထားသှားအောငျ လုပျတဲ့နရောမှာ တအားကို ဆရာကတြယျလေ ။ ပွီးရငျ သူတို့ပဲ အထားသှားခံရသလို . . . ပွီးရငျ သစ်စာဖောကျခံရသလို ဒရမျမာတှေ ခငျးပွီး အသနားတှေ ခံခငျြကွသေးတာ ။
ပွီးရငျ သိပျပွီးလဲ အပွောငျးအလဲ မွနျတယျ …စခဈြခဲ့တုနျးက ဓူဝံကွယျကို စှတျပေးမယျ့လူနဲ့ ကောငျးကငျကို ဒူးနဲ့တိုကျမယျ့လူနဲ့ တကယျတမျး ကိုယျ့အခဈြကို ရသှားတဲ့အခါကြ မိုးရှာရငျတောငျ ကွောကျနတေတျကွတယျလေ ။ မိုးရှာလို့ပါ နပေူလို့ပါ အကွောငျးပွခကျြပေါငျးမြားစှာနဲ့ ပွောငျးလဲလိုကျဖို့ဝနျမလေးတတျကွဘူး ။
မိနျးမ မာယာ . . .တဲ့ အဲ့ဒီမိနျးမ မာယာတှကေ ခေါငျးစဉျတပျလို့ရပါသေးတယျ ။ ဘယျနရောမှာ ဖျောပွထားခွငျး မရှိတဲ့ ယောကျြားမာယာတှကေတော့ ဘာနဲ့မှ နှိုငျးမရအောငျ မြားပွားလှနျးတာပဲ။ အဲ့ဒီမာယာတှကေို မရှောငျနိုငျခဲ့တဲ့ မိနျးမသားတှကေ နာကငျြရတာပါပဲ ။
ယောကျြားတှကေ နားလညျရခကျတယျ တကယျကို သိပျခကျတာပါ ။ တဈစိုကျမတျမတျတှေးထားလို့မရသလို . . . တဈစိုကျမတျမတျ ယုံကွညျထားလိုကျလို့မရဘူး ။ ယုံကွညျမိရငျ ယုံကွညျလိုကျတဲ့သူကပဲ မှားတာ သူတို့ဘယျတော့မှ မမှားဘူး ။ သူငါ့ကို ခဈြတာပဲ ငါတော့ ပွနျပွီးကွငျနာဖို့တှေးလိုကျတာနဲ့ ကိုယျ့မှာ စပွီးရှုံးတော့တာပဲလေ ။
သူတို့က ၁၀၀ရာခိုငျနှုနျးက စခဈြပွီး အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ တဖွေးဖွေး သုညနား ကပျလာတယျလေ ။ မိနျးကလေးတှကေ သုညက စခဈြပွီး တဖွေးဖွေး ဆကျပွီးခဈြလာတာနဲ့အမြှ တဖွေးဖွေးစပွီး ရှုံးတော့တာပါပဲ ။
ယောကျြားတှကေလေ မိနျးကလေးထကျ ပိုပွီး မာယာတှေ မြားသလို ပိုပွီးလဲ နားလညျရခကျပါတယျ ။
ယောက်ျားလေးတွေက နားလည်ရခက်တယ်ဆိုတာထက် ပိုပြီး နားလည်ရခက်ပါတယ် ။ ဒါ မ်ိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားရသမျှအမြင်ပါ ယောက်ျားတိုင်းက ဒီလိုပါဆိုပြီး ဝါးလုံးနဲ့ သိမ်းကြုံးရမ်းနေတာမဟုတ်ဘူး ။
စာအုပ်တွေထဲမှာ . . .မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့မာယာတွေဟာ ဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းပဲ ရေးထားတတ်ကြတယ် မသိရင် ယောက်ျားတွေမှာ မာယာတွေမရှိတဲ့အတိုင်းပေါ့ တကယ်ဆို ယောက်ျားတွေ သုံးတတ်မာယာက ပိုပြီးများသလို ပိုပြီးလဲ ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ် ။ သိပ်ချစ်တာပဲ ဆိုတဲ့စကားကအစ . . . နောက်ဆုံး မဖြစ်နိုင်လို့ပါဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ တိုင်းမှာ မာယာတွေ ပါပြီးသားပဲလေ ။
ယောက်ျားလေးတွေက . . .ဘယ်တော့မှ လမ်းခွဲရအောင်လို့စပြီးမပြောဘူး ။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်က မိန်းမသားကို လမ်းမခွဲခွဲချင်တဲ့အထိ စိတ်မပျက် မပျက်ပျက်အောင် အမျိုးမျိုးတွေလုပ်ပြီး မိန်းကလေးဖက်က ထားသွားအောင် လုပ်တဲ့နေရာမှာ တအားကို ဆရာကျတယ်လေ ။ ပြီးရင် သူတို့ပဲ အထားသွားခံရသလို . . . ပြီးရင် သစ္စာဖောက်ခံရသလို ဒရမ်မာတွေ ခင်းပြီး အသနားတွေ ခံချင်ကြသေးတာ ။
ပြီးရင် သိပ်ပြီးလဲ အပြောင်းအလဲ မြန်တယ် …စချစ်ခဲ့တုန်းက ဓူဝံကြယ်ကို စွတ်ပေးမယ့်လူနဲ့ ကောင်းကင်ကို ဒူးနဲ့တိုက်မယ့်လူနဲ့ တကယ်တမ်း ကိုယ့်အချစ်ကို ရသွားတဲ့အခါကျ မိုးရွာရင်တောင် ကြောက်နေတတ်ကြတယ်လေ ။ မိုးရွာလို့ပါ နေပူလို့ပါ အကြောင်းပြချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ ပြောင်းလဲလိုက်ဖို့ဝန်မလေးတတ်ကြဘူး ။
မိန်းမ မာယာ . . .တဲ့ အဲ့ဒီမိန်းမ မာယာတွေက ခေါင်းစဉ်တပ်လို့ရပါသေးတယ် ။ ဘယ်နေရာမှာ ဖော်ပြထားခြင်း မရှိတဲ့ ယောက်ျားမာယာတွေကတော့ ဘာနဲ့မှ နှိုင်းမရအောင် များပြားလွန်းတာပဲ။ အဲ့ဒီမာယာတွေကို မရှောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ မိန်းမသားတွေက နာကျင်ရတာပါပဲ ။
ယောက်ျားတွေက နားလည်ရခက်တယ် တကယ်ကို သိပ်ခက်တာပါ ။ တစ်စိုက်မတ်မတ်တွေးထားလို့မရသလို . . . တစ်စိုက်မတ်မတ် ယုံကြည်ထားလိုက်လို့မရဘူး ။ ယုံကြည်မိရင် ယုံကြည်လိုက်တဲ့သူကပဲ မှားတာ သူတို့ဘယ်တော့မှ မမှားဘူး ။ သူငါ့ကို ချစ်တာပဲ ငါတော့ ပြန်ပြီးကြင်နာဖို့တွေးလိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်မှာ စပြီးရှုံးတော့တာပဲလေ ။
သူတို့က ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းက စချစ်ပြီး အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ တဖြေးဖြေး သုညနား ကပ်လာတယ်လေ ။ မိန်းကလေးတွေက သုညက စချစ်ပြီး တဖြေးဖြေး ဆက်ပြီးချစ်လာတာနဲ့အမျှ တဖြေးဖြေးစပြီး ရှုံးတော့တာပါပဲ ။
ယောက်ျားတွေကလေ မိန်းကလေးထက် ပိုပြီး မာယာတွေ များသလို ပိုပြီးလဲ နားလည်ရခက်ပါတယ် ။